मोटरसाइकल दुर्घटनामा भाई गुमाएका मनोज गजुरेल विछिप्त – Butwal 24 News
मोटरसाइकल दुर्घटनामा भाई गुमाएका मनोज गजुरेल विछिप्त
October 18, 2021 October 18, 2021 Butwal 24 NewsLeaveaComment on मोटरसाइकल दुर्घटनामा भाई गुमाएका मनोज गजुरेल विछिप्त
हाँस्य कलाकार मनोज गजुरेलका भाई विवेकको सडक दुर्घटनामा निधन भएपछि गजुरेल निकै दुखी भएका छन् । गजुरेलका मामाका छोरा विवेकको मोटरसाइकल दुर्घटनामा निधन भएको हो । उनले सामाजिक सञ्जाल फेसवुक मार्फत लामो स्टटास लेखेर त्यसवारे जानकारी दिएका हुन् । साथै गजुरेलले आफ्ना भाईको निधनको कारण सडक मर्मतमा सडक विभागले ध्यान नदिएको भन्दै गुनासो गरेका छन् ।
आइतवार एक लामो स्टाटस लेखेर उनले सडक मर्मत नगर्ने कमृचारी र सम्बन्धीतलाई कारवाहीको माग गरेका छन् । उनले लेखेको स्टाटस यस्तो छ ।**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोस**,
विवेक मृत्युको कारण ज्या’न मा रा सडकको कामचोर विभाग
२२ बर्षीय भाइ विवेक सापकोटा काठमाडौबाट मोटर साईकलमा एक्लै पुर्व जाँदै थिए । २१ बर्षकै दयारामसिंह राजवंशी झापाबाट चन्दनकुमारसहित पश्चिम आउँदै थिए । महेन्द्र राजमार्ग अन्तर्गत सप्तरीको अमाहा भन्ने ठाउँमा दयारामको बाईक अनियन्त्रित भएर आफ्नो लेनमा कुदिरहेको विवेकको बाईकसँग जुध्न पुगे । विवेक र दयारामको मृत्यु भयो, चन्दन कुमार घाईते भए ।
दुर्घटनामा बितेका २१ बर्षिय दयारामपनि कसैको मुटुको टुक्रा थिए । उनका परिवारमा पनि ठुलो बज्रपात परेको छ । उनिप्रति पनि हार्दिक श्रद्धाञ्जली🌷दयारामले मा र्छु भनेर विवेकलाई हा ने को पनि हैन होला, विवेकले म र्छु भनेर दयारामको बाईकमा ठो कि एका पनि नहोला । सत्यतथ्य के हो, प्रहरीले पत्ता लगाउला तर अमाहा सडक दुर्घटनाको एउटा गम्भीर पाटोको बारेमा बोल्नैपर्ने भएको छ ।**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोस**,
जुन ठाउँमा दुर्घटना भयो, त्यहाँ लामो समयदेखि एउटा ठूलो खा ल्डो छ । कल्भर्ट छेउको त्यो खा ल्डो पुर्न स्थानीयवासीले धेरै पटक अनुरोध गरे । अनुरोधको सुनुवाई नहुँदा प्रदर्शनहरु भए, जुलुस निस्किए । हिजो त झ ड प नै हुनपुग्यो । केही स्थानीय र प्रहरीहरु घाईते भए । उनिहरुको उपचार चलिरहेको छ । सिघ्र स्वास्थलाभको कामना ।
हाम्रो भाइ विवेक अनि सम्भवत दयाराम राजवंशी दुवैजना श्रमजिवी परिवारका सदस्य थिए । उनिहरु त बितेर गए तर सडक मर्मत सम्भारमा गैरजिम्मेवार देखिएको सरकारका कारण निम्तिएका यस्ता दुर्घटनाले खोसेका विवेक र दयाराममा आश्रीत परिवारलाई न्याय र क्षतीपुर्ती कसले दिन्छ ? केन्द्र सरकार ? प्रदेश सरकार ? स्थानीय सरकार ? कि निर्माण र मर्मतको जिम्मा लिएको ठेकेदार कम्पनी ?**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोस**,
सप्तरीको यो सडक दुर्घटना एउटा प्रतिनिधि घटनामात्र हो । देशैभरीका सडकमा यस्ता समस्या छन् । बर्सेनि हजारौंको संख्यामा नागरिकको ज्यान जाने गरेको छ । समाधानको अनुरोध गर्दा केन्द्र सरकार प्रदेश सरकारलाई देखाउँछ । प्रदेश सरकार स्थानीय सरकारतिर पन्छाउछ । स्थानीय सरकार सडक विभागलाई दो ष दिन्छ । सडक विभाग ठेकेदारलाई दो ष दिन्छ । ठेकेदार बजेट निकासा भएको छैन भनेर पन्छिन्छ ।**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोस**,
उनिहरुको यो गोलचक्करमा सडक दुर्घटनामा सरकारकालागि त केहीथान मान्छे म रे होलान् तर विवेक र दयारामका परिवारका लागि भने सर्वस्व हुन् । उनिहरुको सर्वस्व लु टि एको छ । यो व्रम्ह लु टको मुख्य कारण हाम्रो गैरजिम्मेवार सरकारले नै यिनिहरुलाई क्षतिपूर्ति दिनसक्छ । यस्ता दुर्घटना नदोहोर्याउन प्रतिवद्धता जाहेर गर्नसक्छ ? प्रतिवद्धतालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न गराउन र मुख्य दो षिलाई दण्डित गर्न सक्छ ? दबाब कायम राखौं ।
अन्त्यमा, पुनस् सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका दुबै भाइहरुको आत्मा शान्तीको कामना गर्दछु । उनिहरुको आश्रीत परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति दिन सरकार, स्थानीय निकाय, सडक विभाग र सम्बन्धित ठेकेदारलाई जोडदार माग गर्दछु । अनि, सडक निर्माणलाई ग म्भी र रुपमा नलिने, मर्मत संभारमा ध्यान नदिने, कमसल निर्माण सामाग्री प्रयोग गर्ने र बारम्बार नागरिकको जिउ ज्या न लाई लिईरहने सम्बन्धित निकाय र व्यक्तीलाई कारवाही किन नगर्ने ?**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोस**,
कठै,अंतर जातीय विवाह गरेको भन्दै विश्वकर्माकि छोरीलाई घरमै यसरी झु न्डाएर मा रे (भिडियो हेर्नुस्)
आहा ! बिदेशी घानाका युवक र नेपाली चेलि बुढाबुढिले यसरी मनाए दशै (हेर्नुस् भिडियो )
बेलायतमा दुवै डोज खोप लगाएका सयौं व्यक्ति संक्रमित
September 28, 2021 September 28, 2021 Butwal 24 News